UMPHEZULU WEENDAWO ZOKUSEBENZA EZIQINISEKILEYO (ISIKHOKELO SOYILO | IIPROSES & CONS) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umphezulu weeNdawo zokuSebenza eziQinisekileyo (Isikhokelo soYilo | iiProses & Cons)
Umphezulu weeNdawo zokuSebenza eziQinisekileyo (Isikhokelo soYilo | iiProses & Cons)
Nantsi indawo esomeleleyo yokujonga umphezulu wee-countertops uyilo olubandakanya ikhitshi kunye nemibono yokuhlambela, indleko, izinto zokwakha, imibala, iimveliso eziphezulu kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi. Umphezulu oqinileyo lukhetho oluphezulu lwetheyibhile yeendawo ezahlukeneyo ekhaya, ngakumbi igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi.
Imiphezulu yeetafile zomphezulu eziqinileyo ziyindlela enobuchule yokufumana imiphezulu yeetafile entle, enombala omkhulu kunye nokukhetha ipateni.
umtshakazi nomyeni izihlangu umdlalo
Kukho iintlobo ezimbalwa ezahlukeneyo zokuphakama komphezulu oqinileyo, nganye ineendlela ezahlukeneyo kunye neengozi ezinokuthi zigqitywe, ukhetho lunokufumaneka ngezantsi.
Yintoni ikhomputha yomgangatho oqinileyo?
Izinto eziPhezulu zeComputer Countertop
Iindidi zemiphezulu yeetafile ezingaphezulu komhlaba
I-acrylic esekwe kumphezulu oqinileyo
Ipholiyesta esekwe kumphezulu oqinileyo
Umphezulu oqinileyo weSitayile seComputer kunye neArs
Imibala yeComputer yoMgangatho oqinileyo
Iindleko umphezulu Solita umphezulu
Umphezulu oqinileyo weSitayile sekhitshi
Umphezulu oqinileyo weSitayile segumbi lokuhlambela
Iimpawu eziPhezulu zoPhezulu eziPhezulu
Uyicoca njani imiphezulu yeetafile zomphezulu oqinileyo
Umphezulu oqinileyo yinto eqhelekileyo esetyenziselwa iiplathi. Umphezulu oqinileyo sisixhobo esinganyibilikiyo, esenza ukuba kube lula kwiikhawuntari ezinokuba kufutshane namanzi okanye zichithe ulwelo kuzo.
Imiphezulu yeetafile yomhlaba eyomileyo yaziwa ngokuba ziimpawu zayo ezibonakalayo kwizinto zendalo. Yinto eyaziwayo ngokuhlala ixesha elide kwaye kulula ukuyilungisa.
Izinto ezenziwe ngomphezulu oqinileyo zenziwe ngezithako ezimbalwa ezahlukeneyo, ngakumbi iipesenti ezingama-33 njengezibophelelo kunye nama-66 njengezimbiwa okanye izinto ezizalisayo.
Ezinye zezinto zibandakanya: i-alumina trihydrate (ATH) okanye isiphumo se-bauxite njengesixhobo sokugcwalisa, i-acrylic okanye i-polyester base resins, kunye nee-pigment. Ezinye izinto zinokuphoswa kumxube ukongeza ubuhle obuhlukileyo kumphezulu oqinileyo.
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo zokwenza umphezulu oqinileyo, kwaye ezo zidala iintlobo ezahlukeneyo zomgangatho oqinileyo. Ezi ntlobo zobuso obuqinileyo zineempawu ezahlukeneyo, iimpawu kunye namaxabiso.
I-Acrylic Solid Surface sisicwebezelisi esezantsi, kodwa ifom eyomeleleyo yomphezulu oqinileyo. Imigangatho yomhlaba eqinileyo ye-acrylic ayibonakali kwaye ayinakulindeleka ukuba isilele kumsebenzisi.
Umphezulu oqinileyo we-Acrylic unokugoba kwii-engile ezomeleleyo kunye neegophe, ezilungele izinto zokubala ezineesinki kuzo.
Ngelixa i-acrylic ihlala igqamile ngemibala eqaqambileyo, ayifane ichaphazeleke kumonakalo we-UV kwaye iyaphela kuneendawo ezikhankanyiweyo zepolyester elandelayo. I-acrylic yimveliso entsha uninzi lwabenzi bayo abatshintshela ekunikezeleni.
Umgangatho oqinileyo wePolyester ungabizi kakhulu kwizinto onokukhetha kuzo, kodwa zithathwa njengomgangatho osezantsi weemveliso zomhlaba eziqinileyo.
Ipholiyesta yomphezulu oqinileyo unika ukugqiba okuphezulu okukhethiweyo ngombala oqaqambileyo. I-Polyester ihlala incinci xa ifika kwimveliso kwaye inokuba nemigangatho engaphumeleliyo.
Imigangatho eqinileyo lukhetho olukhulu kwiitafile kwaye iingenelo ziyayibonisa, eyona iphambili yile ilandelayo.
Okungathandekiyo: Umphezulu oqinileyo unokuchasana kakhulu namanzi, ukungcoliseka, kunye neebhaktiriya, kushiya umphezulu ococekileyo. Umphezulu oqinileyo ushiya imathiriyeli elungileyo yokuhlambela nekhitshi zokubala ngenxa yalo mgangatho ungafunekiyo.
Ihlala ixesha elide: Ngombulelo kwindalo eyohlobo olulodwa lomhlaba oqinileyo izinto zihamba yonke indlela ngesiqwenga. Oku kukhokelela kubomi obude kuba naluphi na utshintsho olunokuthi lwenziwe, okanye ukunxiba ixesha elingenakubonwa ngenxa yokuba imathiriyeli iza yonke indlela.
Easy ukulungisa: I-countertop yomhlaba oqhekekileyo ingalungiswa ngokusebenzisa enye yeekiti zokuthunga ezifumaneka kwiimarike njengeprojekthi ye-DIY. Ukulungiswa kweentambo ezincinci zeenwele kunokuba lula njengokusebenzisa izinto osenokuba sele unazo ekhaya. Okanye umntu unokuqesha ingcali ukulungisa i-countertop.
Ngelishwa ngazo zonke ezo zinto zilungileyo, kukho izinto ezimbalwa ezisezantsi xa kuziwa kwindawo eqinileyo. Ezinye zeendlela zilandelayo.
Inokuchaphazeleka kumonakalo: Umphezulu owomeleleyo bubuhle obuthathaka nobuthambileyo, ke ngoko unokuqokelela imikrwelo kunye nezinto ezikrwelekileyo ukuba awulumkanga. Qiniseka ukuba usebenzisa iibhodi zokusika kunye nolunye ukhuselo ukunqanda ukonakaliswa. Ukuba ufumana indawo eyonakeleyo, kulula ukuyilungisa.
Ayikwazi ukumelana nobushushu: Xa ubeka izinto kumphezulu oqinileyo kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba abazukubetha ngombhobho. Ubushushu obugqithisileyo bunokuyitshintsha indawo ekuyiwa kuyo ngokuqinileyo, kwaye ngelixa kulula ukuyilungisa kumonakalo omkhulu, umhlaba onyibilikisiweyo awukho phantsi kwelo nqanaba.
amaqela omtshato apholileyo kuye
Umphezulu oqinileyo uyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo kunye neepateni.
Iithowuni zomthi: Umthi ubonakala umphezulu oqinileyo ufumaneka kwiitoni ezahlukeneyo ngokusekwe kumenzi.
Izinto eziqinileyo: Imibala eqinileyo iza kuyo nayiphi na imibala kwibala. Umenzi ngamnye unokufumaneka okwahlukileyo, kodwa uninzi lwezinto zinokwenziwa ngokwezifiso.
Ukujonga ilitye: Ukufumana umphezulu oqinileyo ukuze ubonakale njengemabhile, zwi , Igranite, isileyiti, njl.njl. kuyenzeka xa usebenzisa umphezulu oqinileyo. Nangona ii-textures kunye neembonakalo azizukufana ncam, yinto ephantse yasondela kwisiqingatha seendleko.
Umzekelo: Kukho itoni yeepateni ezahlukeneyo ezinokuthi zikhethwe ngokusekwe kuludwe lwabavelisi, ezinye zinamachokoza, zinemigca, zenziwe marbled, njl.
Imiphezulu yeetafile zomphezulu oqinileyo ziyenye yeendlela ezilungileyo zokugcina iindleko ziphantsi ngelixa usabanomgangatho wobuhle. Ngokwesiqhelo izinto ezintle zeza nexabiso elikhulu, kodwa indawo eqinileyo lixabiso eliphantsi kunelitye lendalo ngelixa inezinto ezifanayo, kubandakanya ukuhlala kwayo kunye nobuchule obuhlala ixesha elide.
Umphezulu oqinileyo uxabisa malunga ne- $ 52 ukuya kwi-120 yeedola kwenyawo nganye efakiweyo. Kukho izinto ezinokunyusa okanye zehlise ixabiso.
Ubungakanani bungaba yinto enkulu xa kuziwa kwixabiso le-countertop eqinile, izinto ezifunekayo, ixabiso eliphezulu, kunye neendleko eziphezulu zokufakela.
Ngobungakanani obukhulu kunokubakho iimfuno zemigangatho, kunye nemiphetho emininzi, yomibini enokongeza kwiindleko zizonke. Enye into enegalelo inokuba yindawo kunye nezinye iintlobo zokwenza ngokwezifiso ezinokuba yinxalenye yoyilo.
Imiphezulu yeetafile yomgangatho oqinileyo ichanekile embindini xa kufikwa kubuhle kunye nexabiso elichanekileyo, ukuba lukhetho oluqhelekileyo xa umntu enesisindo sobubi kunye nobubi bendawo ephezulu xa kuthelekiswa nokugqitywa.
Umphezulu oqinileyo sisiseko esonwabileyo, ngelixa ufumana yonke into oyifunayo kwiitafile zakho.
Sebenzisa imiphezulu yeetafile eqinileyo ekhitshini kuluncedo olukhulu, ngakumbi xa kubandakanyeka iisinki. I-acrylic esekwe kumgangatho oqinileyo womhlaba iya kubonelela ngemilo elungileyo, ngaphandle kweempawu ezomeleleyo kunye nezomeleleyo.
Ikhitshi ihlala ithatha indawo yokuchitheka okanye amanzi amaninzi anokwenza ukuba ezi mpawu zibaluleke kakhulu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukubeka nayiphi na imbiza okanye iipani ezishushu kakhulu kwindawo eqinileyo kuba oko kungawutshisa umphezulu, kwaye oko akulungiseki ngokulula.
Imikrwelo emincinci kunye nezinto ezikhuhliweyo zinokulungiswa ezenza umphezulu oqinileyo ube lukhetho olufanelekileyo kwindawo ephezulu yokusetyenziswa enje ngekhitshi.
Imiphezulu yeetafile yomgangatho oqinileyo ebekwe kwigumbi lokuhlambela endlwini yonke ilungile ukusuka kwindawo yokusebenza kunye nokuma kwexabiso.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambi kokuba i-acrylic esekwe kumphezulu womhlaba inikezela ngobume obukhulu besinki yokubekwa kuyo. Njengamakhitshi, izindlu zangasese zichaphazeleka kumanzi amaninzi kunye nokuchitheka kokubini kulwelo kunye nokuqina, okwenza ukuba umgangatho ongena porous ubaluleke nalapha.
Igumbi lokuhlambela ligumbi lokusetyenziswa okuphezulu, okwenza ukuba izinto ezizinzileyo kunye nokukhululeka kokulungiswa kube luncedo kakhulu.
Izipho ezilungileyo zodade womthetho
Umphezulu oqinileyo unokufumaneka kwiitoni zeendawo, ukusuka kwitoni yeempawu ezahlukeneyo. Ezi zinokuthengwa ngokuthe ngqo kumenzi okanye kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye neendawo zoyilo lwasekhaya.
Ezinye zezona zinto zilungileyo nezona zixhaphakileyo zingezantsi, olu luluhlu nje oluncinci olunokuchukumisa umphezulu weemveliso ezikhoyo.
Indawo eqinileyo yeCorian: I-Corian ihlala iluphawu lokuqala lokucinga xa umntu ecinga ngomhlaba oqinileyo, kungenxa yokuba le yenye yeenkampani zokuqala ukwenza umphezulu oqinileyo, emva kokuba ilungelo labo lomenzi liphelile, kwavuleleka ukuba ezinye iinkampani ziqale ukuyenza. I-Corian yenziwe ngezinto zendalo ezihlanganiswe ne-acrylic.
Umphezulu oqinileyo weWilsonart: IWilsonart yaziwa ngokugqitywa kwayo ngeplastiki, kodwa ikwaye yavela neendawo eziqinileyo zokudibanisa iiplastiki zazo. UWilsonart usebenzisa isiseko se-acrylic kwizitikethi zomhlaba oqinileyo. UWilsonart wenza umgca omkhulu wokugqiba ophindaphindiweyo ngomthi kunye nezinto zamatye.
Ifomica umphezulu oqinileyo: IFomica lolunye uphawu oluqale njengeplastiki yokuthambisa kwaye yathatha indawo eqinileyo. IFomica ikwasebenzisa isiseko se-acrylic ukwenza imiphezulu yeetafile yomhlaba eqinileyo.
Ukucoca indawo eqinileyo kulula, kwiziseko ezininzi zonke iitafile eziyifunayo kukusula ngamanzi afudumeleyo anesepha. Olu hlobo lokucoca lunokwenziwa mihla le.
Nangona indawo eqinileyo ingeyonto engenamanzi ukuba amanzi ahlala kuyo ixesha elide kakhulu inokuphucula umboniso bhanya-bhanya onika ukugqitywa kokujongwa kwe-dingier, ukusula ukuchitheka xa kusenzeka yeyona ndlela ilungileyo yokuphepha olu hlobo lwecomputer.
Ukucoceka okunzulu kukho i-ammonia ecocekileyo esekwe okanye i-countertop yokucoca izinto ezithile ezinokusetyenziswa. Oku kunokunceda ukususa naziphi na iifilimu okanye ukwakha okwenzeka ngokuhamba kwexesha.
Sebenzisa isindululo esisetyhula xa ucoca iikhawuntari kungcono ukucoca imihla ngemihla, oku kufuneka kwenziwe ngelaphu lokuhlamba, akukho mfuneko yayo nantoni na enzima kunaleyo.
Imiphezulu yeetafile yomphezulu oqinileyo emnyama ifuna ukucocwa rhoqo ngakumbi kunendawo yokubala enomgangatho oqinileyo. Imiphezulu yeetafile enesinki kufuneka icocwe umthwalo onzima rhoqo kwiiveki ezimbalwa, oku kunokufuna iblitshi yasekhaya.
Elinye inqaku elinxulumene noko jonga eyethu imiphezulu yeetafile emarmore ekhulisiweyo igalari apha.
izinto zokwenza ngaphambi komtshato
isipho sesikhumbuzo sonyaka omnye wesintu
imibala yepeyinti yokungena
I-avareji yobudala boomolokazana bokuqala kunye nabakhwenyana eUnited States
utshintsha njani ifani nge pa